Zụta USB nkwụnye ụgwọ na-agbanwe agbanwe na - enweghị ntutu - enweghị mbupu ụgwọ & enweghị ụtụ isi | WoopShop®
USB Rechargeable Automatic Cordless Hair Curler .gwè
Agba Chrome White
USB Rechargeable Automatic Cordless Hair Curler --gwè - Chrome na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Max. okpomọkụ: 200 ° C
ike: Erughị 25 W
Ụkpụrụ Asambodo Ọdịmma: CE
Onye na - Thermostatic
Min. okpomọkụ: 160 ° C
Ntinye ntutu: akọrọ
Dayameta nke onye na-eduzi ọkụ: Erughị 15 mm
Ụdị Ụdị Ụdị Mpịakọta Ọnụ Ụzọ: Ofu, Na-abụghị rotatable
Akụkụ Ngwá Agha Na-ekpo ọkụ: ndị ọzọ na-
Usoro ngbanwe nke ntanetị: ndị ọzọ na-
Ihe omuma nke okpokoro / mmanya: aluminom
Ike Isi Iyi: Akọrọ & Rechargeable
Model Number: Ntutu ntutu
ụdị: Monofunctional curler
voltaji: 100-240v (Nkeji volta)
Ije ozi ndụ nke okpokoro agba / mmanya: Oge 5,000-10,000
Batrị ike: 2500mAh
Volta batrị: 3.7V
Batrị Wattage: 9.25 Wh
Terydị batrị: RBatrị Lithium-ion na-ewepu ọkụ
Oge nkwụ ụgwọ: 3.5 awa
Onu ahia: 19x6cm / 7.48x2.36
agba: White, Rose Gold
Njirimara: Hikuku Curler, Igwe ntutu, Akpaka ntutu curler
Itdị ihe: Cordless Automatic Hair Curler iron wireless
Na ọdabara ntutu: Cordless Automatic Hair Curler ígwè wireless
LCD buru ibu buru ibu nwere okpomọkụ, nduzi, na oge doro anya, bụ nke a na-agụta ma bara uru.
Otu isi akpaka asọfe, efu isi ọrụ.
30s kpo oku ngwa ngwa, wetara gị ntutu na ntutu na-agbanwe agbanwe. Ejiri ihe mkpuchi ọkụ na-enweghị ihe na-egbu egbu, nke nwere ike ichebe gị ka ị ghara ịgba ọkụ.
Enwere ike ịgbanwe ọnọdụ okpomọkụ, oge na ntuziaka. Enwere ike ịhọrọ ọnọdụ okpomọkụ nke 150-200 ℃ (300-390 Fahrenheit). Enwere ike ịhazi oge ịme ihe atụ na 8-18s, a ga-enwe ike ịhazi ntụpọ ntụgharị iji gboo mkpa nke ntutu dị iche iche ma mepụta curl zuru oke mfe.
Batrị lithium-ion 2500mAh wuru n'ime ya nwere ike ịghọta ezigbo ojiji ikuku. N'otu oge ahụ, enwere ike iji ya dị ka ọkọnọ ikike mkpanaka.
Ọ dị mfe ibugharị mgbe ị na-eme njem, nwere ike ịgbanye ntutu oge ọ bụla na ebe ọ bụla.
1 x Ngwaọrụ Ngwaọrụ
1 x Plastics Comb
Akpa Nchekwa 1 x
Dabere na 7 nyocha
Enwetara m ngwaahịa ahụ mgbe ọnwa 1 gachara. Ọ dị mma & m na-amasị na ya obere. Ọ dị ntakịrị ma ọ dịghị mkpa. Daalụ maka ntutu ntutu na mbo! Dị ka foto
Buru ngwa ngwa, echere m na obi ga-adị m ụtọ na nke a.
Ezi ọnụahịa-ogo ruru, mbupu ngwa ngwa.
Ọ dị nnọọ ka ọ dị na foto a. M rutere na ezigbo ezigbo ọnọdụ, nke ọma juputara na qie ruo mgbe ọ furu m ịtọpu hehe. Abịara m obere obere batrị na m nwere ike igosi ya ozugbo, ọ dị ezigbo mma na eziokwu. Ọ dị ezigbo mma.